Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre oo Maanta ka Qaybgalay Xuska Ciidanka Xooga Dalka (SAWIRRO)
April 12, 2017 – Xarunta Wasaarada Gaashaandhiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta lagu qabtay Munaasabad balaaran oo lagu xusayay 12-ka April oo ah sanad guuradii 57aad ee ka soo wareegtay markii la aas aasay Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Munaasabadani oo si heersare ah loo soo qaban-qaabiyay ayaa waxaa ka soo qeybgalay Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre, Wasiiro, Xildhibaano katirsan labada Aqal, Saraakiil ciidan iyo Marti sharaf kala duwan.
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’isul Wasaare Kheyre ayaa maanta xirnaa dareeska ciidanka milatariga Soomaaliya, waxaana sidoo kale munaasabada ku suganaa masuuliyiin kale oo ka tirsan dowlada oo iyana soo xirtay dareeska ciidamada Milatariga.
Fanaaniinta qaranka Soomaaliya ayaa heeso u badan wadani ku soo bandhigay Munaasabada oo xiligan ka socota Wasaarada Gaashaandhiga, waxaana la arkayay Madaxweyne Farmaajo oo fanaaniinta dhaxda ka galay lana qiirooday heesaha la qaadayo qaarkood.
Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha ayaa la filayaa in khudbado ka jeediyaan musaanadan lagu xusayo aas aaska ciidanka Xooga Soomaaliyeed, waxaana munaasabada maanta ay tahay mid si heer sare ah loo soo agaasimay.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyay, waxaana maanta xiran inta badan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho.
April 13, 2017 tuugahaladilo2015